Mixpanel: စိတ်တိုင်းကျ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်၊ Martech Zone
Mixpanel: စိတ်တိုင်းကျ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ရပ်မှန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
သောကြာနေ့, သြဂုတ်လ 16, 2013 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဘာလဲ စာမျက်နှာကြည့်ရန် မင်းရဲ့စီးပွားရေး သင်သိပါလား? သေချာလား? တခါတရံမှာငါတို့တစ်တွေအသွားအလာတစ်တန်ရတယ် ကိစ္စမရှိပါဘူး, နှင့်အခြားအချိန်များကိုကြီးမြတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးကို ဦး ဆောင်လမ်းပြအနည်းငယ်ကြီးစွာသောလည်ပတ်မှုရ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသီအိုရီကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ ဦး ဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့လုပ်ရမလား။
ကျနော်တို့ actionable အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် analytics ရှေ့မှာ - ကြိုက်တယ် subscription-based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Pirate မက်ထရစ်။ ဒီမျိုးဆက်သစ် analytics အပလီကေးရှင်းများသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်တူညီသောမက်ထရစ်နှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။ သူတို့သည်သင်၏ site ကိုသွားသောအခါသူတို့လာရောက်လည်ပတ်သူကလုပ်ဆောင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုသူတို့လုပ်ဆောင်သည်။
Mixpanel ဖြစ်ရပ် - မောင်းနှင်သည် analytics မည်သည့် online site၊ web-based platform သို့မဟုတ် mobile application သို့မဆိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အတွက်တည်ဆောက်ထားသည့်ပလက်ဖောင်း။
Mixpanel အများဆုံးအဆင့်မြင့်ဖြစ်ပါသည် analytics မိုဘိုင်း & ဝဘ်အတွက်ပလက်ဖောင်း။ စာမျက်နှာမြင်ကွင်းများကိုတိုင်းတာမည့်အစား၊ သင်၏လျှောက်လွှာတွင်လူများပြုလုပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်သင့်အားကူညီသည်။ ဥပမာလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုသည်ရုပ်ပုံတစ်ခုတင်ခြင်း၊ ဗွီဒီယိုကြည့်ခြင်း (သို့) ပို့စ်တစ်ခုဝေငှခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
Mixpanel ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားဖြစ်ရပ်များကိုခြေရာခံရန်၊ ၎င်းဖြစ်ရပ်များနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုဆက်စပ်ရန်နှင့်ပရိုဖိုင်းအချက်အလက်များကိုလူတို့နှင့်ဆက်စပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အစစ်အမှန်မှော်ဖြစ်ပျက်နေရာအရပ်ဖြစ်၏! profile ည့်သည်၏ပရိုဖိုင်းသည်သင်အသုံးပြုသူကိုပစ်မှတ်ထားရန်၊ အီးမေးလ်ပို့ရန်၊ အီးမေးလ်တစ်ခုစီစဉ်ရန်၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း push အသိပေးချက်ကိုစတင်ရန်အကြောင်းအရာများကိုစီစစ်နိုင်သည်။
နှင့်အညီ, သင်တန်း, အဆုံးစွန်ဖြစ်ရပ်ဒါဝယ်ယူမှုဖြစ်ပါတယ် Mixpanel အဖြစ်ကောင်းစွာပြောင်းလဲခြင်းဖမ်းယူ။
Movable မှင်: Real-Time၊ ကိုယ်ပိုင်နှင့်စမ်းသပ်ပြီးအီးမေးလ်စျေးကွက်
သြဂုတ် 16, 2013 မှာ 8: 07 AM
Doug ဂရိတ် post! မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒါဟာတကယ်သိကောင်းစရာများ ..